Formentera, Pitiusas सबैभन्दा सानो को प्राकृतिक सुन्दरता Absolut यात्रा
लस सालिनास प्राकृतिक पार्क (फोरमेन्टेरा)
Formentera को सबैभन्दा सानो बसोबास टापु हो Baleares करीव eight-वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफलको साथ। ती भित्र, पछि अर्को ibiza र धेरै आईलेटहरू मनपर्दछ Espalmador o एस्पार्डेल, तथाकथित पिटियसस टापुहरू.
पछि जनसंख्या कांस्य आयु, को megalithic परिसर द्वारा पुष्टि भएको रूपमा Ca na Costa, फोरमेन्टेराको द्वारा बनाईएको line kilometers किलोमिटर तट भन्दा कम छैन शानदार चट्टानहरू y शानदार समुद्र तटहरू, धेरै जसो टिडा द्वारा फ्रेम। यदि हामीले पाइन र जुनिपर वनहरूको वनस्पति थपेमा, हामीसँगaछ सपना परिदृश्य त्यसले टापुलाई सम्पूर्ण युरोपका लागि पर्यटन गन्तव्यमा परिणत गर्‍यो। यदि तपाईं Formentera जान्न चाहानुहुन्छ, हामी तपाईंलाई आमन्त्रित गर्न आमन्त्रित गर्दछौं।
1 फोरमेन्टेरामा के हेर्ने
1.1 स्यान फ्रांसिस्को जेभियर
1.2 सान फेरान डे सेस रोक्स
1.3 एल पिलर डे ला मोला, फोर्मेन्टेराको पठार
1.4 ला सविना, फोरमेन्टेराको गेटवे
1.5 यो Caló de Sant Agustí हो
1.6 फोरमेन्टेराको समुद्र तटहरू
1.6.1 काला साओना
1.6.2 सेस Illetes
1.6.3 सेस प्लेटजेट्स
1.6.6 यो पुजोल हो
1.6.7 काभल डेन बोरिस
2 फर्मेन्टेरामा यात्रा गर्नु कहिले राम्रो हुन्छ
3 टापुमा कसरी पुग्ने
4 Formentera मा के खान गर्ने
फोरमेन्टेरामा के हेर्ने
तर सबै कुरा फोरमेन्टेराको आकर्षणहरूका बीच परिदृश्य होईन। यो पनि छ राम्रो भूमध्य शैली गाउँहरु र चासोको धेरै स्मारकहरू। आउनुहोस् उनीहरूलाई चिन्नुहोस्।
स्यान फ्रांसिस्को जेभियर
यो टापुको राजधानी हो र १ XNUMX औं शताब्दीमा स्थापना भयो। यो एक सुन्दर शहर हो जसले माछा मार्ने गाउँको पुरानो आकर्षणको व्यवस्थापन गर्न सकेको छ। यसमा तपाईले भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ सा टान्का भेलाको रोमान्स्केल चैपलसहरको निर्माण भएको थियो। को सान फ्रान्सिस्कोको चर्च, १ the औं शताब्दीमा पनि निर्मित, र को पीठो मिलहरू सा मिरांडा.
पछिबाट, तपाईं टापुको भव्य दृश्यहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ, विशेष गरी अद्भुत सालिनास डे इबिजा र फोर्मेन्टेरा प्राकृतिक पार्क, एक क्षेत्र जुन पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट मूल्यवान छ यो भूदृश्य दृष्टिकोणबाट दर्शनीय हो। प्राकृतिक आरक्षित र चराहरूको लागि विशेष संरक्षण क्षेत्र हुनुको साथै यो विश्व सम्पदा हो। अन्तमा तपाईसँग सान फ्रान्सिस्को जेभियर एक सुन्दर छ एथनोग्राफिक संग्रहालय टापुको जीवनको बारेमा।
सान फ्रान्सिस्को जेभियरको चर्च
सान फेरान डे सेस रोक्स
टापुको बीचमा अवस्थित, यो शहर र यसको पारासीस शब्द पूर्ण रूपमा माथि उल्लिखित पार्कमा फेला पर्दछ। यो राम्रो छ चर्च १ th औं शताब्दीदेखि जुन वर्ग र सानो पैदल यात्री सडकहरू सँगै मिलेर आरामदायक ऐतिहासिक केन्द्रको गठन गर्दछ। यस विलाको नजिक तपाईं मेगालिथिक चिहान देख्न सक्नुहुन्छ Ca na Costa, पहिले नै उद्धृत, र पुन्टा प्राइमा को रक्षा टावर। हामी तपाईंलाई पर्यटन केन्द्रको भ्रमण गर्ने सल्लाह दिन्छौं यो पुजोल हो, जहाँ तपाईं असंख्य बार र रेष्टुरेन्टहरू पाउनुहुनेछ।
तर, स्पष्ट रूपमा किनभने यो पार्कमा छ, यसको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण यसले तपाईंलाई प्रस्ताव गर्ने परिदृश्यहरूमा पर्दछ। यो प्रायद्वीप को मामला हो यो Trucadors हो, टिब्बाको एक इस्थमस तीन किलोमिटर लामो, दुई सय मिटर चौडा र दुबै किनारहरू। र यसको अन्त्यमा, पचास मिटर मात्र टाढा छ Espalmador को टापु, जो पैदलमा पुग्न सकिन्छ जब ज्वार कम छ, जबकि त्यसो गर्न सिफारिस गरिएको छैन। पालैपालो, लगभग एस्पाल्माडोरमा जोडिएका अन्य साना टापुहरू हुन्: ती हुन् सा Torreta, कास्टवी y डेस पोर्क्स, जसमा तपाईं 1864 मा बनेको लाइटहाउस देख्न सक्नुहुनेछ।
को एस्पार्डेल टापु, अघिल्लो एक भन्दा चार किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित। योसँग भेरिजिन्स क्लिफहरू छ, तर एउटा सुन्दर कोभ पनि छ मोलेट। यसको पश्चिमी भागमा, तपाईं एक पुरानो अवशेष देख्न सक्नुहुन्छ मुस्लिम बचाव टावर र उत्तरमा ट्रामन्ताना लाइटहाउसपचास मिटर अग्लो।
एल पिलर डे ला मोला, फोर्मेन्टेराको पठार
यो शहर वरपरको एक शानदार पठारमा अवस्थित छ चट्टानहरु लगभग सय मिटर अग्लो। यसमा तपाईले भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ चर्च १th औं शताब्दी र फारो, जहाँबाट तपाईंसँग फोरमेन्टेराको तटको अद्भुत दृश्यहरू छन्। तपाईं पनि हिंड्न सक्नुहुन्छ दाखबारी र को लागी पैदल यात्रा पठार पार कि।
तर यसको अन्य ठूलो आकर्षण हो शिल्प बजार बुधवार र आइतवार दिउँसो आयोजित र सबै टापुबाट व्यक्ति आकर्षित गर्दछ। बाँकी दिनहरू, यो शान्त र केही हदसम्म पृथक शहर हो। वास्तवमा यो प्राय: जसो भनिन्छ "एक टापु भित्र एउटा टापु".
यो Trucadors हो
ला सविना, फोरमेन्टेराको गेटवे
हामीले यस शहरको बारेमा सायद तपाईलाई भन्नु पर्दैन, यदि तपाई यस टापुको भ्रमण गर्नुभयो भने तपाई यस शहर भएर जानुहुनेछ। यो पोर्ट हो जहाँ जहाजहरू आइबिजाबाट आइपुग्छ र, केहि महिनामा, बाट डेनिया। योसँग माछावालाको घाट र दुई समुद्री क्लबहरू छन्।
ला सविना मा हरेक दिउँसो फ्वा मार्केट शैली hippie तपाईंको होटलहरू, बारहरू र रेस्टुरेन्टहरूको वरपर। तपाईले भाँडामा पनि लिन सक्नुहुन्छ साइकल गर्न लस सलिनासको प्राकृतिक पार्क हुँदै मार्गहरू.
यो Caló de Sant Agustí हो
यस सानो शहरको यती धेरै माछा मार्ने परम्परा छ कि तपाईं अझै पनी प्राचीनहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ काठका बूथहाउसहरूजहाँ डु the्गा समुद्री पानीबाट आश्रय पाए। २००२ देखि तिनीहरू सांस्कृतिक चासोको स्थान भएको छ।
अर्कोतर्फ, गाउँको भागको धेरै नजिक छ हरियो मार्ग 25, जुन ला मोला भनिने ऐतिहासिक मार्गको साथ दौडिन्छ क्यामे डे सा पुजादा र त्यसले तपाईंलाई अद्भुत परिदृश्य दिन्छ। यस शहरको अगाडि तपाईले रोमको महलको भग्नावशेष देख्न सक्नुहुनेछ ब्लेई सक्छ, सांस्कृतिक चासोको साइट घोषित गरियो।
फोरमेन्टेराको समुद्र तटहरू
Balearic टापु को एक अर्को ठूलो आकर्षण यस मा बस्ने सुन्दर समुद्री तट र कोभ्स। प्रत्येक स्वाद को लागी एक छ। हामी सबैभन्दा महत्त्वपूर्णहरू हेर्न जाँदैछौं।
केवल एक मात्र तपाईले यस टापुको दक्षिणपश्चिममा पाउनुहुनेछ काला साओना, घेरिएको चट्टानहरू र करिब एक सय चालीस मिटर लामो। तपाईलाई अभ्यास गर्नका लागि यो उत्तम छ कायाक o प्याडल सर्फ। र, यदि तपाईं चट्टानमा पुग्नुभयो पुन्टा रासा, के तपाईं यो गर्न सक्नुहुन्छ स्नोर्कल र उनीहरूको राम्रा अवलोकन गर्नुहोस् पानीमुनि गुफाहरू.
यो प्रायद्वीपमा अवस्थित छ यो Trucadors हो र धेरै टापुहरू जस्तै कि ट्रामन्ताना र डेस फोर्न। त्यसकारण, यसको पानी शान्त र नीलो नीलो छ। यदि तपाईं यसको राम्रो सेतो बालुवा थप्नुहुन्छ भने, तपाईं एक सपना जस्तो परिदृश्य हुनेछ। वास्तवमा यो एक पटक भन्दा बढि मूल्या rated्कन गरिएको छ "संसारको सब भन्दा सुन्दर समुद्र तट".
यो फोर्मेन्टेराको उत्तरी भागमा अवस्थित छ। तर हामीले बहुवचनमा बोल्नुपर्छ, किनकि यो यस्तै हो तीन साना समुद्री तटहरू चट्टानी हेडल्याण्डहरू द्वारा विभाजित। तिनीहरू कम जनिपर्सको जंगल द्वारा फ्रेम गरिएको हो र तपाइँ अभ्यास गर्न यो उत्तम छ डाइभिंग.
यस सम्प्रदाय अन्तर्गत सबै समावेश छ टापुको दक्षिण तट, पाँच किलोमिटर समुद्र तटहरू जो धेरै सुन्दर छन्। सबै भन्दा लोकप्रिय र परिवार अनुकूल छ Ca Marí, Arenales y कोपिनारमा। तिनीहरू सबै मुख्य होटलहरू र रेस्टुरेन्टहरूको क्षेत्र नजिक छन् ताकि तपाईं नुहाए पछि स्थानीय र समुद्री खानाको मजा लिन सक्नुहुन्छ। नजिकैको पनि छ काला डेस मोर्ट्स, चट्टानहरू मुनिको सानो कोव र मछुवाहरूको टुप्पोले भरिएको।
जसरी यसको नामले देखाउँदछ, यसले पूर्वको सामना गर्दछ र फोरमेन्टेरामा सबैभन्दा सुन्दर समुद्र तटहरू मध्ये एक हो। करीव डेढ किलोमिटर लम्बाइ र सय मिटर चौडाइको साथ, यो राम्रो, स्पष्ट बालुवा र शान्त र क्रिस्टलीय पानी छ। यस कारणले गर्दा, यो पर्याप्त थिएन, यो टिब्बा र वनले नुन भण्डारबाट अलग गरेको अघि छ। संक्षेप मा, एक अद्भुत परिदृश्य र विशाल पर्यावरणीय मूल्य.
यो पुजोल हो
जसरी तपाईंले घटाउनु भएको हुन सक्छ, यो त्यस्तै नामको टुरिष्ट क्षेत्रमा छ जुन हामीले तपाईंलाई पहिले नै भनिसकेका छौं। एकातिर यो बन्द हुन्छ पुन्टा प्राइमा र अर्को मा यो संग संचार सान्दर्भिक समुद्र तट। यसले चट्टानका र अन्यका साथ बालुवाको तानलाई वैकल्पिक बनाउँदछ जहाँ डु boats्गाका लागि स्लिपवेहरू छन्। र, यदि तपाई समुद्रतर्फ हेर्नुहुन्छ भने, तपाईले नेभारा देख्नुहुनेछ सानो टापुहरूको परिदृश्य। यससँग जोडिएको, थप रूपमा, तपाईंसँग छ सा रोक्वेटा बीच, यसको कडा बतासबाट कम बारम्बार
काभल डेन बोरिस
अर्को शानदार दृश्य यस समुद्र तटले प्रस्ताव गरेको छ जहाँबाट तपाईं स्पष्ट दिनहरूमा, हेर्न सक्नुहुन्छ इबीसा तट। यसको सूर्यास्तहरू पनि सुन्दर छन्। यसै गरी, यसलाई सुरक्षित डुन प्रणाली र जुनिपर जंगलले आश्रय दिन्छ। अन्तमा हामी तपाईलाई भन्दछौं कि यसको बालुवा सेता र नरम छन् र यसको पानी शान्त छ, यसको छवि भए पनि। लगभग जंगली.
फर्मेन्टेरामा यात्रा गर्नु कहिले राम्रो हुन्छ
बेलारिक टापुको मौसम प्रकारको छ समुद्री भूमध्यसागरीयतसर्थ, सबै वर्ष दौर धेरै नरम। जाडो चिसो र रमाइलो र ग्रीष्म warmतु तातो छ। औसत तापमान न्यूनतमको लागि छ डिग्री र अधिकतमको लागि उनन्तीस हुन्छ। यसको अंशको लागि वर्षा अभाव हुन्छ, अक्टुबर र नोभेम्बर महिनामा केन्द्रित हुन्छ। थप रूपमा, फोरमेन्टेरासँग महान उचाइ छैन, जसले मौसमलाई एकै ठाउँमा तुल्याउँछ।
त्यसकारण, वर्षको कुनै पनि समय टापु भ्रमण गर्न राम्रो छ। जे होस्, हामी तपाईंलाई मा जानु पर्ने महिना सल्लाह दिन्छौं अप्रिल देखि अक्टुबर सम्म दुबै रमाइलो तापक्रम र पानीको अभावको लागि।
टापुमा कसरी पुग्ने
Formentera एक एयरपोर्ट छैन। यसैले यस टापुमा पुग्नको लागि मात्र तरिका भनेको यस मार्फत हो जहाजहरू। त्यहाँ बाट एक लाइन छ ibiza र ती दिनमा धेरै यात्रा गर्दछन् जुन पचास मिनेट मात्र हुन्छ। यद्यपि गर्मीमा फेरीहरू पनि प्रायद्वीपबाट विशेष रूपमा छोड्दछन् डेनिया, प्रांतमा एलिकान्टे.
एक पटक टापुमा, तपाईं यसको वरिपरि घुम्न सक्नुहुन्छaभाडा कार। यो सानो छ र दूरी छोटो छ। यसको मुख्य सडक हो PM -820, बाट जान्छ जो ला सविनाको पोर्ट सम्म ला मोला लाइटहाउस र यसैले यसलाई पूर्वबाट पश्चिममा पार गरियो।
इस्ले देस पोर्क्स
जे होस्, फोरमेन्टेराको सानो आकारको मतलब यो हो कि तपाईं यसलाई भित्र पनि जान सक्नुहुनेछ साइकल यसको असंख्य माध्यमबाट हरियो मार्गहरू। तपाइँलाई एक विचार दिन, टापुमा दुई पोइन्ट बीच अधिकतम दूरी बीस किलोमिटर भित्र मात्र छ, ठ्याक्कै ला सविना र ला मोलाको बीचमा।
Formentera मा के खान गर्ने
अर्कोतर्फ, तपाईं यस उत्कृष्ट ग्यास्ट्रोनमीको प्रयोग नगरी टापु छोड्न सक्नुहुन्न। एक हो परम्परागत खाना एक तर्फ माछा मा आधारित र अर्को सुक्खा क्षेत्र को उत्पादन मा आधारित छ। पहिलेको सम्बन्धमा, तिनीहरू केवल स्वादिष्ट ग्रील्ड वा भुनेका हुन्छन्।
तर तीनिहरू विस्तृत तरीकाले पनि तयार छन्। उदाहरण को लागी, मा किसान सलाद, जसले आलु, रोटी र सुख्खा माछा बोक्दछ, वा फ्राइड अक्टोपस आलु, प्याज र खुर्सानी संग। र फ्राइड स्क्विड पनि तिनीहरूको मसीमा पकाइन्छ; को बुलेट डे पिक्स, जुन आलुको साथ माछा स्टू हो र बन्डोज एरोज। यस्तै तयारी पनि छ sofrit पृष्ठहरु, केवल यो मासु र जीविकाको साथ बनेको छ।
मिठाई को रूपमा, हामी तपाईंलाई प्रयास गर्न सल्लाह दिन्छौं ओरेलेट्स, जो एनीसको साथ केहि कुकीहरू हुन्; को ग्रिक्सोनरा, जो एक एनिमेदा पुडिंग हो, र flao, ताजा चीज र टकसालले बनेको केक। पिउन को लागी, प्रयास गर्नुहोस् मदिरा यस टापुका आदिवासी, जुन १th औं शताब्दीदेखि नै बनेको छ।
अन्तमा, Formentera एक हो प्राकृतिक खजाना सुन्दरताले भरिएको। तपाईले लिनु भएको प्रत्येक चरणको साथ तपाईले ल्यान्डस्केप पहिलेको भन्दा अझ प्रभावशाली पाउनुहुनेछ। तर यसले तपाईंलाई स्मारकहरू, एक भव्य मौसम र स्वादिष्ट खाना पनि प्रदान गर्दछ। सबैभन्दा सानो भ्रमण गरेको जस्तो महसुस नगर्नुहोस् पिटियसस टापुहरू?
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » Formentera
जहाँ ग्रीस मा नग्न समुद्र तटहरु छन्